एप्पल वाचको साथ ड्रोनहरू प्रबन्ध गर्ने वास्तविकता हुनेछ आईफोन समाचार
ड्रोनहरू नियन्त्रण गर्नुहोस् र एप्पल वाचको साथ बत्तीहरू अन गर्नुहोस्? अब यो सम्भव छ
लुइस डेल बारको | | Apple Watch
के तपाईंले कहिले पुग्ने सोच्नुभएको छ? तपाईको एप्पल वाचको साथ ड्रोन नियन्त्रण गर्नुहोस्? वा हावामा गेस्चरहरू ड्राइंग गरेर बत्तीहरू बन्द र खोल्ने? सत्य यो हो कि लगभग सबै क्षेत्रहरूमा टेक्नोलोजीको विस्तार र विस्तारले हाम्रो जीवनमा सुधार ल्यायो र यसको प्रयोगको नयाँ क्षेत्रहरू। पहिरनहरू के हो, यस पटक, प्रविधिको भविष्यलाई चिह्नित गर्नुहोस् जुन सधैं छ, यदि हामीले यसलाई महसुस गर्नुभएन भने पनि।
युवा ताइवानको समूह, धेरै महिना कडा परिश्रम पछि, त्यो सूत्रको साथ आउन सफल भयो सानो प्रणालीलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यस्तो उडान ड्रोनको मामला हो - जसलाई हालका समयमा यति धेरै बिक्री गरिन्छ - वा केहि हालसालका रूपमा लोकप्रिय 'बग' को रूपमा स्टार वारको पछिल्लो किस्तमा, बीबी 8 ड्रोइडको प्रतिकृति।
यसको मतलव अतिरिक्त शारीरिक नियन्त्रणहरू र तिनीहरूको प्रयोगमा बाधा पार्ने नबहरूबाट छुटकारा पाउनु हो। तर यस खोजका विकल्पहरू त्यहाँ छोडिदैन, तर हामी यो पनि गर्न सक्छौं हाम्रो घरमा बत्तीहरू नियन्त्रण गर्नुहोस् पहिले जस्तो कहिल्यै छैन। यो केहि चीज हो जुन हाल सिरी र फिलिप ह्युको साथ गर्न सकिन्छ उदाहरणका लागि, तर यो अझ अगाडि जान्छ।
यो पर्याप्त हुनेछ हावामा "रातो" को लागी "R" को आकार बनाऔं, कि प्रकाश रातो हुन्छ, यदि हामी "पहेलो" (अंग्रेजीमा पहेलो) को "Y" को आकार बनाउँदछौं भने यसको रंग पहेलो हुनेछ। हामी कार्यहरू पनि गर्न सक्दछौं जस्तै ताली बजाउने बत्तीहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा बन्द गर्न। कुनै श doubt्का बिना यो थोरै मात्र हो जसले हामीलाई छोटो समयमा भविष्यमा कस्तो हुने झलक दिनेछ, कम र थोरै गरेर बढी गरिरहेको।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » ड्रोनहरू नियन्त्रण गर्नुहोस् र एप्पल वाचको साथ बत्तीहरू अन गर्नुहोस्? अब यो सम्भव छ
के टिम कुक स्टीभ जॉब्स बन्न मा नरक छ?
आईफोन c सी ले आइपड टचको जस्तै रंग र g्ग ल्याउनेछ